अफिसमा कस्तो हुनुपर्छ व्यवहार - वर्क प्लेस - नारी
अफिसमा कस्तो हुनुपर्छ व्यवहार
अफिस पुगेपछि मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्छ । मोबाइल रिङटोनमा छ भने आवाज कम गर्नुपर्छ । आफ्नो सिटबाट उठ्दा मोबाइल लिन बिर्सनु हुँदैन । कुनै जरुरी तथा व्यक्तिगत फोन उठाउनु छ भने अरूले नसुन्ने ठाउँमा गएर उठाउनुपर्छ । मिटिङ, वर्कसप तथा सेमिनारहरूमा मोबाइलको स्वीचअफ गर्नुपर्छ । अफिसको फोन अनावश्यक प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
माघ २५, २०७३अफिसमा काम गर्दा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । व्यवहारकै कारण प्रिय वा अप्रिय हुने भएकाले राम्रो व्यवहार गरेर सबैको प्रिय बन्न सकिन्छ । बानी–व्यवहारमा कमी–कमजोरी भए तिनलाई हटाएर वा सुधारेर कार्यक्षेत्रका साथीभाइसँग मिलेर बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
अफिस समयको ख्याल
अफिसमा समयमै पुग्नुपर्छ । विशेषगरी कार्यक्षेत्रमा हुने जरुरी मिटिङका लागि सजग रहनुपर्छ । अफिसमा हुने जुनसुकै मिटिङमा समयमै पुग्नु आवश्यक छ ।
सानो स्वरमा कुराकानी
अफिसमा सानो स्वरमा कुराकानी गर्नुपर्छ । साथीभाइको फोन आयो भने सानो स्वरमा कुराकानी गर्नुपर्छ । ठूलो स्वरमा कुरा गर्दा वरिपरिका मानिसहरूलाई बाधा हुन्छ ।
अफिस पुगेपछि मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्छ । मोबाइल रिङटोनमा छ भने आवाज कम गर्नुपर्छ । आफ्नो सिटबाट उठ्दा मोबाइल लिन बिर्सनु हुँदैन । कुनै जरुरी तथा व्यक्तिगत फोन उठाउनु छ भने अरूले नसुन्ने ठाउँमा गएर उठाउनुपर्छ । मिटिङ, वर्कसप तथा सेमिनारहरूमा मोबाइलको स्वीचअफ गर्नुपर्छ । अनावश्यक रुपमा अफिसको फोन प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
घरजस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रको सरसरफाइमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । आफ्नो अफिस सधैं सफा राख्नुपर्छ । आफ्नो डेस्कमा पेपर तथा अन्य वस्तु मिलाएर राख्नुपर्छ । आफू बस्ने कोठा सफा राख्दा काममा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
अफिसमा क्यान्टिन छ भने केही फरक पर्दैन तर घरबाटै टिफिन लगेर अफिसमा खाने गरिएको छ भने खाना खाएपछि डेस्क सफा गर्नुपर्छ । बाहिरबाट लन्च बक्स मगाउने भए गन्ध नआउने खालको लन्च मगाउनुपर्छ । खाना खाँदा मुखबाट आवाज निकाल्नु हुँदैन ।
आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्नु हुँदैन । त्यसको साटो आफ्ना सहकर्मीको कामको बयान गर्नुपर्छ । आफ्ना कनिष्ठहरूको कामको जिम्मेवारी आफूले लिनु हुँदैन ।
ड्रेसिङ सेन्समा ध्यान
अफिस आउँदा भड्किलो पहिरन लगाउनु हुँदैन । प्रोफेसनलाई ध्यान दिएर आफ्नो पहिरन छनोट गर्नुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा आउँदा बढी वासना आउने परफ्युमको प्रयोगबाट जोगिनुपर्छ ।
आफ्नो कामका बारेमा चिन्तित रहनुपर्छ र आवश्यक कुराकानी मात्र गर्नुपर्छ । बेकारका कुराकानी गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । समय बर्बाद गर्नु हुँदैन । आफ्ना साथीभाइहरूसँग गुनासो वा अप्ठ्यारो पर्ने खालका विषयमा विवाद गर्नु हुँदैन ।
शौचालय प्रयोग गरेपछि फ्लस गर्न बिर्सनु हुँदैन । शौचालयको भुइँ पनि सफा राख्नुपर्छ ।
अफिसमा कसैको साथ विशेषगरी पुरुष सहकर्मीहरूसँग भद्दा मजाक गर्नुहुँदैन । कसैप्रति दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका शब्द पनि प्रयोगमा गर्नु हुँदैन । अफिसमा आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिरा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
अरूको सामान माग्ने बानीको त्याग
आफ्ना साथीभाइको सरसामान माग्नु हुँदैन । सामान साटासाट गरेर प्रयोग गर्नु हुँदैन । उनीहरूको सामान प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
कसैको चेम्बरमा जानु छ भने ढोका ढकढकाउनु सामान्य शिष्टाचारभित्र पर्छ । यसलाई पालना गरी सभ्य हुन सकिन्छ ।
चैत्र ५, २०७४ - कस्तो छ खाना पकाउने तेल ?
चैत्र ८, २०७३ - कस्तो सेपका लागि कस्तो पहिरन ?
फाल्गुन ६, २०७३ - समानता व्यवहारमा हुनुपर्छ
करियर परिवर्तन गर्दा भाद्र १०, २०७२